(DAAWO SAWIRADDA). Mas’uuliyiin katirsan Xukuumadda Somalia oo Talooyin adag u Jeediyay Dufcadii Jabouti loogu soo xiray Tababarka – idalenews.com
Waxaa Gelinkii dambe ee Shalay kulan lagu dhiirigalinaayo Saraakiisha iyo Ciiddamadda Tababarka loogu soo gabagabeeyay Dalka Dajibouti ka dhacay Garoonka Aadan Cadde ee Magaaladda Muqdisho.
Mas’uuliyiin ay ka mid yihiin Ra’isul wasaaraha, Wasiirka Gaashandhiga, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Somalia iyo Saraakiil ka tirsan Ciiddamadda Dowladda Somalia kulan dhiirigalin ah Garoonka ugu qabtay Dufcaddii Labaad ee Ka tirsan Ciidanka Booliska oo Taba bar uu ugu soo Gaba gaboobay dalka Jabuuti.
Mas’uuliyiinta Dufcadaasi la hadlay ayaa waxa ay ku dhiira galiyeen in Dalka Somalia uu iminka galay Marxalad ka duwan Marxaladihii uu soo maray isla markaana Dufcadaasi loo bahan yahay inay Ka Feerjignaadaan waxa loogu yeeray isdibmarinta, waxaana lagu wargaliyay in Taladda Dalka uu gacanta ugu jiro Ciiddamadda Ammaanka.
Si kastaba ha ahaatee, Mas’uuliyiintaasi ayaa waxa ay gacanta u galsheen Ciiddamadaasi Tallo ku saabsan in Somalia uu ka socon doono amarkooda iyo Suggida Ammaanka, sheegayna in dalka ay iyaga u maqan yihiin.
Daawo: Koox diidan Shirka Jubaland State oo ka digtey in la afduubo Arrimaha deegaanka Jubooyinka